Xaqiijinta Cinwaanka emaylka, Nadaafadda iyo Bixiyeyaasha Xaqiijinta
Jimco, Nofeembar 13, 2020 Isniin, February 15, 2021 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 7 daqiiqo
Suuq geynta emailka waa ciyaar dhiig. 20-kii sano ee la soo dhaafay, waxa kaliya ee lagu beddelay emaylku waa sidaas wanaagsan email soo diraha ayaa sii wadaya in ciqaab intaa ka sii badan ay soo saaraan adeeg bixiyaasha emaylka. In kasta oo ISPs iyo ESPs ay gebi ahaanba isku duwanaan karaan haddii ay doonaan, haddana si fudud ma yeelaan. Natiijadu waxay tahay in uu jiro xiriir iska soo horjeed ah oo u dhexeeya labadooda. Bixiyeyaasha Adeegga Internet-ka (ISPs) waxay xannibaan Bixiyeyaasha Adeegga Emailka (ESPs) then ka dibna ESPs ayaa lagu qasbay inay xannibaan macaamiisha.
Haddii in ka badan 10% ee emaylkaagu xun yihiin, in ka yar 44% ayaa la keenaa!
Maaha wax fudud sida laba-doorbid in-warshadaha. Goobaha sida annaga oo kale ah waxay kala shaqeeyaan la-hawlgalayaasha olole wadaagga iibiyeyaasha iyo macaamiisha. Ma siinayno iyaga fursad ay ku galaan liistadayada, laakiin marar badan ayaannu wada-ururinnaa cinwaanno emayl si wada jir ah ugu fulino ololeyaal Taasi waxay ahayd madax xanuun weyn. Adeeg bixiyaasha emaylka dan kama lihi habka optin-gaaga iyo raadraaca hanti-dhowrkaaga; waxay si fudud u qaadanayaan inaad tahay spammer.
ESP-yada sida MailChimp waxay hirgeliyeen sirdoon cinwaanada emaylka ee nidaamka loo yaqaan Omnivore. Iyadoo Omnivore, Mailchimp ay dirtay 50,000 kun oo digniin ah isla markaana ay xirtay 45,905 akoonno xun xun sanadkii 2011 oo kaliya. Waxay dhiirrigelin karaan xaqiiqda ah in xisaabaadkaasi ay ahaayeen kuwo xaasidnimo ah… Waxaan ku doodi karaa in in badan oo ka mid ahi ay ahaayeen shirkado si fudud ugu diraya liisaskooda oo aan adeegsanayn dhaqannada ugu wanaagsan.
Sida laga soo xigtay Jupiter Research, in kabadan 20 boqolkiiba diiwaangelinta emaylka waxay ka kooban yihiin qoraal, cinwaan, domain iyo khaladaad kale. Wax u qabashada wax fudud sida u dirista liis hore halkaasoo marin gaar ah ee cinwaanada emaylku ay kor u qaadi karaan marinkooda. Taasi maaha wax xun. Ma aha in la xuso bots halkaas oo riixaya cinwaannada emaylka SPAM iyada oo loo marayo nidaamyo maalin kasta si ay isugu dayaan oo ay kuu qabtaan. Waxyaabaha layaabka leh, feker ahaanteyda, ayaa ah inaan aaminsanahay inay u fududahay SPAMMER inuu ku soo diro emaylkaaga sanduuqaaga marka loo eego celceliska shirkadda diraya fariin sax ah.
Bixiyeyaasha Adeegga Iimaylka ayaan sidoo kale daacad ka ahayn heerka gaarsiintooda, sidoo kale. Badanaa, waxay ku dhawaaqi doonaan a 99% qiimeynta la gaarsiin karo, laakiin daabacaadda yar waxay sheegaysaa inay tahay kadib dhowr emayl oo la soo diro. Waa hagaag, duh… kuwa ugu horreeya ee soo dira ayaa qabta cinwaannada emaylka aan ansax ahayn! Celceliska heerka aqbalaadda ee a Dhibcaha Diraha oo ah 91 ama ka weyn waa 88%. Haysashada 1% liiskaaga liidata waxay hoos u dhigi kartaa samatabbixintaada in ka badan 10%!
Mahadsanid, waxaa jira xaqiijinta emaylka iyo liiska bixiyeyaasha nadaafadda suuqa kuwaas oo ururiya sirdoonka waxayna kaa caawin doonaan inaad nadiifiso liisaskaaga kahor intaadan ku dhicin qalalaasahan. Maskaxda ku hay in farqi weyn u dhexeeyo ansaxinta emaylka iyo adeegyada xaqiijinta emaylka. Xaqiijinta emaylka ayaa cadeyneysa in cinwaanka e-mailka si sax ah loo dhisay, halka xaqiijinta emaylka loo adeegsado habab si loo saadaaliyo suurtagalnimada in la gaarsiiyo.
Hubi Cinwaan E-mayl ah oo leh 'Neverbounce'
Boggan wuxuu noqday mid caan ah oo caan ah, sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan hubinno inaan bixinno xoogaa hagid ah oo ku saabsan xulashada adeeg bixiyaha iyo sababta aan ugu kala qaadnay liistada hoose adeegyada nadaafadda ee lagu taliyay iyo kuwa aan la aqoon. Talooyinkayagu waxay ku saleysnaayeen waxyaabaha soo socda:
Shuruudaha - adeeggu ma leeyahay shuruudo iyo siyaasad qarsoodi ah oo jirta oo hubineysa inaysan dib u iibin ama u sii deynin cinwaannada emaylka cid saddexaad?
Transparency - adeeggu ma si furan ayaa looga diiwaangeliyaa khadka tooska ah ee lala xiriirayo macluumaadka lala xiriirayo lahaanshahooda domain, meesha ganacsi, iyo macluumaadka lala xiriirayo? Meheraddu ma tahay meel xafiis u gaar ah (oo aan ahayn sanduuqa PO ama xafiis wadaag ah)?
Taageerada - inay shirkaddu haysato dariiq ay kula xiriiri karto emayl ahaan, foomka xiriirka, ama lambarka taleefanka oo cidna si dhab ah ugama jawaabin codsiga.
Isdhexgalka - ka baaraandegidda badan cinwaanada emailka waa hal shay, laakiin haddii aad dhexgeli karto dhammaan nidaamyadaada iyo meelaha laga soo galo ee aad ka ururinayso cinwaannada emaylka, taasi waa geedi socod aad waxtar badan u leh.
API - miyay leeyihiin API si wanaagsan loo diiwaangeliyey oo aad si toos ah ula jaanqaadi karto meheradahaaga gaarka ah?
Legal - inay shirkaddu degan tahay iyo haddii kale inay ku nooshahay waddan leh xeerar u gaar ah sida GDPR ama emaylka sharciga u hoggaansamida spam.
Hogaaminta Hubinta Emailka iyo Liistada Bixiyeyaasha Nadaafadda
Waa kuwan hogaaminta xaqiijinta e-mayl iyo liiska adeegyada nadaafadda. Kuwaas oo dhan waxaa ka mid ah barxad internetka ah oo aan lagaa rabin inaad la xiriirto koox iib ah dhammaantoodna waxay leeyihiin shuruudo ku saabsan isticmaalka xogta, waa hufan, waxayna si firfircoon uga jawaabeen codsiyada taageerada:
MarnaBounce waxay tirtiraysaa cinwaannada emaylka aan ansax ahayn waxayna si aad ah u yareysaa sicirka guud ee soo kabashada ee ugu dambeynta la gaari karo. NeverBounce waxay bixisaa mid dhameystiran API oo leh isku xirnaansho Marketo iyo VerticalResponse. NeverBounce waa shuraako iyo kafaala-qaade Martech oo waxaan u adeegsanaa adeeggooda liistada liistada.
NeverBounce waxay soosaaratay isdhexgal Act-On, Olole firfircoon, Filim firfircoon, Agile CRM, Sheybaarada Aiva, Autopilot, AWeber, Bombbomb, Bronto, Ololaha-Kormeerka, Suuqa, Xariifnimo, Gujiyeyaasha, Foomamka Cognito, Xiriir joogto ah, Kala xiriir, Beddelka, Daawaday, faleebo, Foomka, Foom, Fulcrum, Getsitecontrol, Foomamka Google, Sare, Hubspot, Xiriir Pro, Xiriir, Si macquul ah, Saabuunta, Intercom, Jotform, Kickofflabs, Mailchimp, Mailerlite, Mailjet, Boostada, Suuqa, Moosend, Nocrmio, Waraaq waraaqeed, Powr, Qualimanka, Quicktapsurvey, Rock Gudbinta, Cafiska Iibka, Sendgrid, Soo dir, Sendx, SharpSpring, Smartemailing, Smartsurvey, Qiiq, Sparkpost, Sahan-Meelkasta, Calaamadaynta, Iska daa, Jawaab toos ah, Himilo6, Woobox, Wufoo, Zapier, Zendesk, Zoho CRM, Iyo Foomamka Zoho
Isku day NeverBounce si bilaash ah
Adeegsiga liistada adeegyada nadaafadda ayaa awood u leh hagaaji boqolkiiba emailada taas oo ka dhigaysa sanduuqa yaree khatarta ah in lagaa xiro by Bixiyeyaasha Adeegga Internetka, iyo yaree khatarta shaqada lagaa eryi karo Adeeg bixiyahaaga Emailka… way u qalmaan maalgashiga haddii aad liis hore hayso ama aad mid kaashaneyso. Maskaxda ku hay inaadan waligaa gaari doonin 100% saxsanaanta liisaskaaga. Dadku badiyaa waxay beddelaan shaqooyinka iyo bixiyeyaasha, iyagoo ka tagaya cinwaankoodii hore ee emaylka.
Intooda badan bixiyeyaashani sidoo kale waxay bixiyaan API si aad ugu dhexgasho hawsha helitaankaaga.
Aeroleads - hel e-mayl ganacsi iyo lambarrada taleefannada ee rajada laga qabo. Waxay leeyihiin chrome kordhin sidoo kale.
BriteVerify - (hadda waa qayb ka mid ah ansaxnimada) aaladaha aad u baahan tahay inaad ka saarto e-maylka aan sax ahayn ee ku jira keydka macluumaadka macmiilkaaga, ololeyaasha suuqgeynta iimaylka, ama joornaalada internetka oo aad uga ilaaliso wanaagga. Si fudud ayaad u jiidi kartaa oo aad u ridi kartaa feyl, la wadaagi kartaa faylka daruurta, waxaadna ka heli kartaa warbixin faahfaahsan liiskaaga adigoon weligaa la xiriirin shirkadda. Waxay sidoo kale leeyihiin API haddii aad jeclaan lahayd inaad ku dhex gasho xaqiijinta iimaylkaaga iyaga!
Feejignaan - Hubiyaha emaylka badan ayaa kuu suurta gelinaya inaad geliso keydka iimaylka isla markaana aad ku nadiifiso liiska emaylkaaga hal guji oo keliya.
Hubiyaha Emailka - Waxay kuu aqoonsaneysaa cinwaanno emayl been abuur ah ama aan ansax ahayn.
Hubiyaha Emailka - (kan kore ka duwan) Email Checker waa mid ka mid ah hormuudka asalka ah ee qeybta xaqiijinta iimaylka, isagoo gacan ka geysanaya hagaajinta gaarsiinta isgaarsiinta emaylka.
Tayada Xogta Khibrada - xalka xaqiijinta emaylka oo isla markaaba caddeeya in cinwaanka iimaylku ansax yahay oo la bixin karo.
Cinwaan cusub waxay ka caawisaa shirkadaha ku tiirsan emaylka inay kaxeeyaan dakhliga adoo dhisaya, cusbooneysiinaya, kala qeybinaya, iyo nadiifinta liisaska e-maylkooda.
Si macquul ahBarmaamijka sirdoonka ee xogtu wuxuu ku saleysan yahay xeerarka siyaasadaha lagu dhaqo iyo algorithms-ka iskaanka-waqtiga-dhabta ah ee adeegsada habab badan oo lakabyo ah si loo aqoonsado, loo ansaxiyo, loona ilaaliyo hanjabaadaha ballaaran ee emaylka ku saleysan
computer - Si dhakhso ah oo dadaal la'aan ah u xaqiiji oo u xaqiiji cinwaannada emaylka iyo cinwaanada si loo hubiyo saxsanaantooda ka hor intaadan ku bixin waqti aan loo baahnayn, tamar, iyo lacag, adigoo kordhinaya gudbinta farriintaada 90%.
Kickbox - Kickbox wuxuu kuu xaqiijinayaa inaad kaliya u dirto emaylka isticmaaleyaasha dhabta ah waxayna kaa caawineysaa inaad kala soocdo cinwaanada tayada hoose leh iyo kuwa xiriirka la leh qiimaha sare. Ilaali sumcaddaada, kor u qaado qiimaha furan, oo lacag ku keydi Kickbox.
MillionVerifier - Xaqiijinta emaylka oo leh dammaanad-qaad sax ah oo sarreeya oo qiime jaban ah.
Cadeyn - Si dhakhso leh u xaqiiji oo u xaqiiji liisaskaaga emaylka. Gaashaan-dhigga Gaarka ah ee EU-US.
TheChecker - 1,000-ka xirfadlayaal ee ka socda 80 + dal waxay ku tiirsan yihiin xaqiijinta emaylkeena badan iyo adeegyada nadiifinta liiska emaylka.
TowerData - Kordhi sicirkaaga boostada adoo nadiifinaya liiska emaylkaaga ee cinwaannada e-maylka ee aan ansax ahayn iyo kuwa been-abuurka ah.
Xverify - Ogow inaad email u direyso xisaab aan ka soo kabsan doonin. Xverify waxay ku xaqiijin kartaa cinwaanada emaylka waqtiga-dhabta ah iyo iyadoo la adeegsanayo.
Webbula - Adeegyada kor u qaadista nadaafadda iyo xoojinta macluumaadka.
Adeegyada kale ee Xaqiijinta Emailka khadka tooska ah
Halkan waxaa ah adeegyo kale oo ah xaqiijinta iyo nadaafadda emaylka ee ma wada lahayn dhammaan tilmaamayaasha kalsoonida ee shirkadaha kor ku xusan.
Ampliz - Ampliz waxay xaqiijineysaa cinwaanada emaylka macaamiishaada waqtiga dhabta ah waxayna kaa caawineysaa inaad ilaaliso nadaafadda emaylka ee gaarsiinaysa heerka jawaabta ugu badan. Degelkan sidoo kale wuxuu ka diiwaangashan yahay Bounceless adeeg. Bounceless wuxuu nadiifin doonaa liistada emaylkaaga adoo ogaanaya emayllada aan la xaqiijin, dabinnada spam, iyo aagagga la tuuri karo.
Antideo - Adeegga Xaqiijinta emaylka ee loo yaqaan 'Email Validation API' si looga takhaluso cinwaannada emaylka la tuuro / ku meelgaarka ah, emayllada spam, iwm, si loo ilaaliyo liisaskaaga.
Xanniba cinwaanada emaylka la tuuro - Soo hel oo xir xira hal mar, tuurista, cinwaanada emaylka ku meel gaarka ah.
Email Xaqiijinta Jumlada - codsi websaydh ah oo xaqiijin kara haddii cinwaanka iimaylku run yahay ama been yahay. Qof kasta oo si joogto ah u soo dira e-mayl wuxuu ka faa'iideysan karaa isticmaalka nidaamka.
KabtanVerify - si dhakhso ah u hubi una nadiifi liistadaada dirista. Jiid oo ku rid faylkaaga aaladda annaguna waxaan sameynaynaa inta hartay. Fudud, dhakhso leh oo ammaan ah.
CleanTheList.com - nadiifinta iyo ansaxinta emaylka.
La xiriir - Raadi cinwaankiisa qof ahaaneed iyo sidoo kale lambarka taleefanka
Xaqiijinta xogta - Si dhakhso leh u caddee liiska emaylkaaga. Ku xidhnow koontada 'MailChimp' ama 'Constant Contact Account' kormeerka socda iyo liistada dayactirka.
DeBounce - Adeegga DeBounce wuxuu kuu oggolaanayaa inaad geliso oo aad ansaxiso liisaska cinwaannada emailka si dhakhso leh oo hab sugan ah.
Emailmarker - Emailmarker wuxuu kaa caawinayaa inaad kala shaandhayso emayl tayo-hoose leh xiriirada qiimaha-sare leh. Waxaan hubinaynaa inaad emayl u dirto isticmaaleyaasha dhabta ah oo aad ilaaliso sumcaddaada, Kordhi ololahaaga emaylka, iyo inaad lacag ku keydiso Emailmarker.
eHygienics waa shirkad xaqiijinta emailka xirfadle ah. Waxay ka saaraan bounada, hanjabaadaha, mudaaharaadayaasha, dacwadaha, iyo dhammaan khataraha kale ee la arki karo ee keydka macluumaadka macaamiisha. eHygienics waxay bixisaa waqti-dhab ah API dhufto ee ay isticmaalaan macaamiisha adduunka oo dhan.
Jawaabaha Emailka - sug liiska nadiifinta iyo xaqiijinta adeegga e-mayl ee xoqin doona, nadiifin doona, xaqiijin doona, isla markaana xaqiijin doona macluumaadkaaga cinwaanka emaylka jira.
EmailHippo - Adeegga khadka tooska ah ee adeegsiga ee macaamiisha iyo macaamiishooda
EmailInspector - Nadiifi oo ka saar cinwaanada emailka aan ansax ahayn liisaska suuqgeyntaada
Liiska Emailka Hubi - Liiska emaylka ee la hubiyey wuxuu kaa ilaaliyaa ciqaabta adoo siinaya xalka ugu xaqiijinta e-maylka ee suuqa, hubinta in liisaska e-maylku yihiin kuwo bilaa lacag ah, ansax ah, isla markaana keenaya ROI sare.
Email u dir YoYo - Xalalka nadiifinta ee ansaxinta e-maylka emailka.
Email Ansixiyaha - Adoo adeegsanaya Byteplant Real-Time Online Validator waxaad si fudud ku xaqiijin kartaa in cinwaan emayl jiro oo ansax yahay.
Klemail - Klemail wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hubiso in e-mayllada aad dirto ay jiraan. Ilaali sumcada boggaaga oo kor u qaado heerkaaga furan.
ListWise - Waxaan falanqeynay natiijooyinka boqolaal milyan oo cinwaanno emayl ah oo aan nadiifinay si aan u qaabeyno mashiin cusub oo liiska-nadiifinta emaylka oo ka awood badan sidii hore. Isku day ListWise II bilaash oo u qaado waxqabadka suuqgeynta emaylkaaga heerarka cusub
BoostadaValidator - wuxuu ku xiraa adeegaha boostada wuxuuna hubiyaa in sanduuqa boostadu jiraan iyo in kale
Jeegga - waxay ansaxineysaa emaylka iyo taleefannada iyadoo la adeegsanayo shabakadaha bulshada
Kooxda Mastersoft - wuxuu diirada saaray xogta Australia
Xaqiijinta Emailka Degdegga ah - Adeeg ku saleysan websaydhka si loo xaqiijiyo cinwaanada emaylka tiro ahaan ama waqti-dhab ah iyadoo la adeegsanayo REST API. Waxay ogaadaan e-mayl aan ansax ahayn oo aan shaqeynin waxayna ku siinayaan warbixin faahfaahsan oo dhameystiran.
SiftLogic - Xaqiijinta Emailka & Dhibcaha si ay uga caawiso meelaynta sanduuqa oo ay u weyneyso sumcadda soo diraha.
Snovio - otomatiga gaadhsiinta qabow - hel, xaqiijin, iyo iimayl rajada leh Snovio oo ah sicir baddal wanaagsan.
Truemail - Hubinta Emailka. Si fudud, Deg Deg ah & Rakhiis. Nadiifi liiskaaga dirista oo kordhi heerka gaarsiintaada illaa 99%. Habka ansaxinta cinwaanka e-maylku weligiis sidaas uma fududaan.
Verifalia - Verifalia waa adeeg xaqiijinta emaylka ah oo ku saleysan websaydh kuu oggolaanaya inaad geliso oo aad ansaxiso liisaska cinwaannada emailka si fudud oo fudud.
Daah-: Annagu wax masuuliyad ah iskama saarin guushaada ku aaddan xulashada mid ka mid ah bixiyeyaashan, waxaan kaliya dooneynay inaan ku siino liis dhammaystiran oo leh qaar xaqiijiyayaal aamin ah oo dheeri ah. Waxaan u adeegsaneynaa xiriiriyeyaal ku xiran qodobkan.
Tags: Act-OnOlole firfircoonJilid firfircoonaeroleadsAgile-CrmAiva-LabsamplizautopilotAWeberBombbombka soo kabtaanbilaa bilaaBriteVerifyBrontoKormeerka Ololahakabtan cadeeSuuqaliis nadiif ahnadiifi liiskaXariifnimoClickFunnelsFoomamka Cognito-gaXiriir joogto ahxiriir ahaanConvertKitDaawadayxaqiijinta xogtaXaqiijinta xogtaSkov-samatabbixinCinwaanka emaylka la tuuroOgaanshaha cinwaanka emailka la tuuri karofaleeboeHygienicscinwaanka emailkanadaafadda cinwaanka emailkajawaabaha emaylkahubiyaha emaylkaemail nadiifinta apigaarsiinta emaylkaiimayl ku soo dirnadaafadda emaylkaliiska email xaqiijiansaxinta emaylkaemail ansax ahxaqiijinta emaylkaxaqiijinta emaylka apisoo dir emailemailhippogaar ahaantijaaboFoomkaFoomCinwaan cusubFulcrumGDPRGetsitecontrolFoomamka GoogleSarehubspothubucoiContactLa xiriir-Proaragti ahaanmeelaynta sanduuqaSi macquul ahSaabuuntaintercomispJotFormemaylka qashinka ahshaandhaynta emaylka qashinka ahkickboxKickofflabsklemailnadiifinta liiskanadiifinta liiskaqor nadaafaddamailchimpMailerliteboostoBoostadasuuqoMoosendNocrmiowarqadPowrcadeyncadeyn.ioqasQualimankaxaqiijinta emaylka deg deg ahQuicktapsurveyGudbinta-RockRFC 1035RFC 1123RFC 2822RFC 5321RFC 5322 RFC 2821RFC 6531cafiska iibkasumcadda dirahaSendgridSoo dirSendxfiiqanSmartemailingSmartsurveyQiiqspamdabinka spamcinwaanada emaylka spamSparkPostyaasiinSahan-Meelkastacinwaanada emaylka ee ku meel gaarka ahbaarahatowerdatarunmailnoocaaan la furinansax liisaska emaylkaxaqiijinhubi emaylkajawaab toosanjawaab celinaragti6WooboxwufooxverifyzapierzendeskZoho CRMFoomamka Zoho
Apr 25, 2014 at 10: 49 AM
Dulmar guud, Doug. Waxaa muhiim ah in la ogaado, hase yeeshe, taasi
ka fogaanshaha iyo ka-guuleysiga dhibaatooyinka gudbinta emaylka waxay u baahan tahay dhammaystiran
emaylka nadaafadda, hagaajinta, iyo adeegga ansaxinta oo lid ku ah si fudud "pinging"
(yacni jeegaanta SMTP) ee iibiyaasha kujira liiskaaga badankood bixiyaan. Jeegga 'SMTP' ayaa kaliya laga bixiyaa macluumaadka
in cinwaanka emaylka la bixin karo iyo in kale
natiijooyinkaan wali wax badan ayey u daayaan sida loo doonayo maaddaama ISP badan ay sameeyaan wax alla wixii ay awoodaan
si looga hortago dhaqankan. Intaa waxaa dheer, buunces ma aha aafada emailka
suuqgeeyayaasha iyada oo ku dhowaad dhammaan shirkadaha ay si fiican uga hooseeyaan xadka soo kabashada ee la oggol yahay
Arimaha ugu waa weyn ee soo food saaray
suuqgeeyayaasha emaylku waxay ka dhashaan cinwaannada emaylka ee dhibaatada leh (tusaale, dabinnada spam, malabka,
spam-yada ka cawda, cinwaanada xun, iwm.) faylalka ay ku jiraan iyo weliba si kama 'ah
khaladaadka nadaafada maaddaama cinwaanadan la geyn karo ay yihiin kuwa Spamhaus iyo
ururada kale ee spam-filter-ka waxay u adeegsadaan inay ka soo saaraan spamers-ka isla markaana ay soomaan
Si looga fogaado raadaarka
ururada ka-shaandhaynta spam oo markaa ku wanaajin kara gudbintaada iyo
dakhliyada, qofku wuxuu ubaahanyahay inuu lashaqeeyo nadaafada emaylka, sixitaanka, iyo ansaxinta
1) Xannib dhibaato
cinwaanada ka soo galaya keydka macluumaadkaaga kana nadiifi kuwa leh
horay u gaadhay
2) Qoritaanka saxda ah iyo
khaladaadka kale ee nadaafada maadaama Spamhaus uu badalay qaar badan oo ka mid ah kuwa sida joogtada ah loo sameeyo
cinwaanada loo diro spamtraps
gudbinta cinwaan kasta oo emayl ah adoo ka hubinaya email-gaar ah
waxqabad (tusaale, furid, guji, gunooyin, cabashooyinka spam, iwm.), Taariikhi ah
Archive ee jeegagga MX iyo SMTP, iyo jeegagga dhabta ah ee SMTP.
Kharashaadka adeegga kor ku xusan
wuxuu ka bilaabmaa dinaar halkii cinwaan e-mayl wuxuuna hoos ugu dhacaa mugga
kordhiyaa. Intaas waxaa sii dheer, iska ilaali wax kasta
adeeg bixiyaha oo adeegiisa aan lagu heli karin waqtiga-dhabta ah, dufcad iswada
(yacni 24x7x365), iyo qaab wadareed buuxa oo adeeg ah, oo ay kujiraan buug gacmeed
dib u eegis.
Hadaad raadineyso inaad xaqiijiso
dadaalkaaga suuqgeynta iimaylka ayaa lagu gaarayaa ROI-ga ugu macquulsan ugu yaraan
kharashyada, dhibaatada, iyo halista, iskaashi lala yeesho shirkad nadaafadda emailka ayaa caddeyn doonta
si aad u noqotid maal gashiga ugu yar ee ugu wanaagsan ee aad waligaa sameyn karto.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida 25% of
shirkadaha Fortune 100 iyo sidoo kale kumanaan suuqley ah, yar iyo weyn, waa
ku haynta keydkooda keydkooda macluumaadka cusub oo casriyeysan, eeg http://www.freshaddress.com/services/email-validation/
Oktoobar 8, 2014 at 2:32 AM
Nabade Doug iyo billkaplan,
Waad arki kartaa http://www.mailboxvalidator.com ee loogu talagalay adeegga nadiifinta liiska emaylka.
Webbula.com waa shirkad kale oo la hubiyo. Waxay bixiyaan nadaafad iyo xaqiijin
Lagu daray, mahadsanid Scotty!
Apr 23, 2015 at 4: 46 PM
Waad ku mahadsantahay talooyinka, haddii qof doonayo inuu wax badan ka barto iibsashada ama nadiifinta keydkooda iimaylka suuqgeynta, hubi hagahan: http://bit.ly/1Ka27Hh
Jul 26, 2015 markay tahay 8:19 PM
Ma isku dayday? http://www.bulkemailchecker.com ? Waxaan isku dayay dhawr adeeg oo ka mid ah liiskaaga ka dib markii aan ku qancay midkoodna natiijooyinka ama qiimaha, waxaan sii waday raadintaydii waxaanan helay Baadh Email Email ah. Waxaan si daacad ah u dhihi karaa raadinteyda adeeg tayo sare oo ansaxin email ah wuu dhamaaday. Waxaan isticmaalay iyaga 4-tii bilood ee la soo dhaafay mana faraxsanaan karin. Iska hubi oo waxaan rajeynayaa inaad sidoo kale joojin karto raadintaada!
Mahadsanid Doug, waxaad leedihiin isbuuc dhammaad wanaagsan!
Jul 27, 2015 markay tahay 12:59 PM
Waxay ku jirtaa liiska!
Sep 23, 2015 at 3: 34 PM
Hadda waxaan ku guda jiraa raadinta shirkad si aan u hubiyo liiskeyga waxaanan doonayay inaan ogaado sababta aad ugu qanci weyday qaar ka mid ah bixiyeyaasha kale? Anigu waan ku cusbahay tan waana wax aad u culus oo maraya degello badan si loo go'aamiyo waxa iyaga ka duwan. Marka haddii aad suurtogal tahay inaad la wadaagi karto sababta aad ugu qanci weyday kuwa kale iyo sababta aad uga dooraneyso Baadhitaanka Email-ka Jumlada dhammaan bogagga kale. Tani way i caawin doontaa aniga iyo qaar badan oo ka mid ah kuwa kale ee akhriya tan. Waan arkaa in qiimayaashu ay aad uga fiican yihiin Jugta Email Checker laakiin waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan ogaado waxyaabo kale oo laga yaabo inay ka sii fiicnaadaan. Waad ku mahadsantahay ka jawaabistaada.
Sep 24, 2015 at 4: 17 PM
Hambalyo Simone, durba waxaa jira khataro la xiriira adeegsiga liisaska gaboobay ama liisaska wax iibsiga. Adeeg bixiyeyaasha emaylka, inta badan, waxay quudhsadaan shirkad kasta oo soo dejisa cinwaanno emayl oo aan la hubin. Iyo Bixiyeyaasha Adeegga Internet-ka ee aqbala emaylka ayaa gabi ahaanba leexin doona dhammaan emaylkaaga ama xitaa xannibi kara bixiyahaaga haddii qaar badan oo ka mid ah cinwaanada emaylladaas ay soo boodaan ama ku soo sheegaan emaylka sida SPAM. Natiijo ahaan, adeegsiga aaladda xaqiijinta liistada ayaa muhiim ah marka la rogrogaayo cinwaanada emaylka ee cinwaannada emaylka ee khuseeya. Haddii aad isticmaasho qalab khaldan, waxaad halis ugu jirtaa naftaada inuu kaa xannibo ISP oo lagaa saaro bixiyaha adeegga emaylka.
Sep 1, 2015 at 11: 27 PM
Waad ku mahadsantahay liiska !! Su aal ayaan qabaa Waxaan rabaa inaan bilaabo adeegayga nadiifinta emaylka. Ma kugula talin kartaa barnaamij kasta oo wanaagsan inaad iibsato. Waxaan eegay nasiib la'aan illaa iyo hadda. Waxaan rabaa inay otomaatig u noqoto sida ugu macquulsan. mahadsanid
Sep 2, 2015 at 10: 40 AM
Hambalyo Josh, Ma aqaan wax gacan-ka-baxsan, laakiin waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah adeegyada halkan ku taxan uu leeyahay API ama uu bixiyo xalka Calaamadda Cad. Taasi waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku calaamadeysid xalka mid adiga kuu gaar ah.
Sep 16, 2015 at 3: 26 AM
Hab fudud oo lagu hubiyo cinwaanka boostada keydka, Is-hubiyaha emailka ugu horumarsan. Proofy.io.
Waxaan hadda ku jirnaa tijaabada beta laakiin waxaan haynaa habka ugu saxsan ee baaritaanka.
Waxaan ubaahanahay jawaab celin. Waxaad heli kartaa xoogaa lacag ah oo aad ku tijaabiso adeegga.
Sep 17, 2015 at 1: 20 PM
Na soo ogeysii markaad ka baxdo beta oo waxaan kugu dari doonnaa liiska bixiyeyaasha!
Oktoobar 13, 2015 at 2:35 PM
Waxaan u aaday bartaada si aan u tijaabiyo adeegyadaada si kastaba ha noqotee - ma jiro lambar taleefan. Aad ayey u yar tahay in qof uun u soo rogo liistada macaamiisha bartaada adigoon saldhiga ka taabanayn maareeyaha koontada ama qof kale si loo xaqiijiyo inaanan kaliya siinaynin macaamiishayda meel aan la aqoon.
Oktoobar 13, 2015 at 4:58 PM
Hadaad gujiso Powered by Neverbounce, waxaad ku arki doontaa lambarka taleefankooda bar qarka u saaran.
Nov 5, 2015 at 7: 27 AM
Haye Douglas. Waxaan xoogaa la yaabay inaadan ku xusin liiskaaga liiska Verifalia. Kaliya maaha inay u muuqato inay tahay mid ka mid ah bixiyeyaasha ansaxinta e-maylka ugu waaweyn Yurub laakiin sidoo kale waxay bixiyaan astaamo gaar ah oo aanan ku arkin meel kale, oo ay ku jiraan taageerada cinwaannada emaylka ee aan isticmaalin xarfaha Laatiinka (waxaan ku leenahay macaamiil badan liiskayaga Singapore, Japan iyo Sacuudi Carabiya, tusaale ahaan), iyo awood u lahaanshaha fulinta qoto-dheer ee ku saabsan marinnada badan, si loo xaqiijiyo cinwaanada emaylka ee arrimaha ku-meel-gaarka ah sida sanduuqa boostada ee kootada ama greylisting. Adeeg bixiyahan ayaa sidoo kale kashifaya E-mayl xaqiijin u ah e-maylka API ee loogu talagalay horumarinta softiweerrada iyo maktabadaha loogu talagalay luqadaha iyo barnaamijyada waaweyn ee barnaamijyada… Oo xitaa waxay leeyihiin qorshe Bilaash ah oo la socda illaa 125 adeegsi oo email oo bilaash ah maalintii.
Nov 5, 2015 saacadu markay tahay 7:07 PM
Mahadsanid - Verifalia ayaan ku darnay liiska!
Nov 25, 2015 saacadu markay tahay 4:56 PM
waan kuugu raacsanahay
waana ku mahadsantahay qoraalkan 🙂
Waxaan isticmaalay qaar ka mid ah talooyinka ku jira boggan si aan u xusho adeegga xaqiijinta liiska emailka. Waxaan ku dhammaaday raacitaanka emaillistverify.com, in kastoo aan ku faraxsanaa iyaga oo ku jira liistadayda ugu horreysa, liis kasta oo dambe oo aan isku dayay inaan ku shaqeeyo adeegyadooda ayaa dhibaato leh, inta badanna kama soo bixi karo liistada nadiifka ah emayl ka dib. Maxay tahay ujeedka adeegsiga adeegyadooda haddii aanan ogaan karin cinwaanada emaylka ee ansaxa ah? Taas ka sokow, taageeradoodu wax jawaab ah kama bixinayso oo kuma mashquulsan yihiin sii haysashada macaamiisha.
Waxaan nasiib wanaag ku helnay Neverbounce… aad u badan sidaa darteed waxaan la wadaagnay iyaga.
Apr 23, 2016 at 7: 41 AM
waxaan rabaa adeeg bilaash ah ama softiweer…. weligeed ma jirtaa?!
Apr 23, 2016 at 8: 44 PM
Midna ma arag.
Apr 25, 2016 at 7: 34 AM
Farriin weyn! Kaliya waxaan la yaabbanahay haddii aan ku biirin karo adeeg sidan oo kale ah GetResponse?
Apr 25, 2016 at 7: 01 PM
Andrea, waan aaminsanahay sidaas. Waxaan u maleynayaa habka loo sameeyo inay tahay in foomkaagu la shaqeeyo API-ga shirkadda xaqiijinta. Marka e-maylka la soo celiyo sida la xaqiijiyay, markaa waad ku riixi kartaa GetResponse.
Jul 9, 2016 markay ahayd 1:21 AM
Waxaan hadda isticmaalayaa https://www.emailverifierapi.com/ si loo xaqiijiyo cinwaanada emaylka ee dalabka suuqgeynta iimaylka shirkadda 500. Wax cabasho ah kama qabo maaddaama tayada adeeggu ay qumman tahay, hase yeeshee waxaan raadineynaa qiimo ka jaban oo bixiya isla tayada. Miyaad soo jeedin kartaa nooc kale oo ah api class grade ah oo la isticmaali karo? "Darajada Ganacsiga" oo ah erayga muhiimka ah. Waad ku mahadsantahay kaalmadaada!
Jul 12, 2016 markay tahay 5:58 PM
Waxaan rajeynayaa, inaad sifiican u shaqeyneysaan, si aan idinla socodsiino, Waxaan wadnaa howsheena xaqiijinta Emailka.
halkaas oo aadan u baahnayn inaad ku lumiso lacagtaada badan. Aad ayaan ugu farxi doonaa inaan kaaga jawaabo wax ku saabsan hawsheenna Sida aan u shaqeyno dhab ahaan.
Waxaan ka helaynaa liiska macaamiisha doonaya inay hubiyaan emayllada, ka dib waxaan u yeernay soo dhaweynta ama Maareeyaha Guud ee shirkadda ka dib waxaan soo aruurineynaa emaylladooda ansax ah,
adoo sidan ku sameynaya 15 maalmood kadib waxaan ku hubineynaa habka xaqiijinta emaylka aan sameyno Eblast.
Haddii qofna wax wareer ama su'aal ah ka qabo arrintan ku saabsan kharashyada.
Xor ayaad u tahay inaad noo soo dirto boostada waan kula soo xiriiri doonaa sida ugu dhakhsaha badan
Oktoobar 25, 2016 at 8:26 AM
Waad ku mahadsan tahay maqaalka! Waxaan isticmaalayay proofy.io oo si cadaalad ah ayaan ugu qancay. Qiimaha caqliga leh waa ka qaalisan tahay kuwa kale iyo sida tayada iyo xawaaraha.
Oktoobar 25, 2016 at 8:47 AM
aad baad ugu mahadsantahay Proofy.io
2, 2016 at 4: 37 AM
Proofy.io waa shirkad khiyaano badan. Adeeggu ma shaqeynayo. Waxaan bixiyay 10000 jeeg, waxaan galiyay liiskeyga 4000 e-mayl waana mid “Processing” ah 2-dii maalmood ee ugu dambeysay .. Caawinta tooska ah ee goobta iyo dhammaan macluumaadka ku saabsan bogga aan ka heli karo khadka tooska ah, iyadoo loo marayo Google markasta waa nin loo yaqaan Roman (oo sidoo kale ah milkiilaha goobta) iyo saaxiibkiis Anna. Ma aanan helin dib u eegisyo kale oo lagu kalsoonaan karo mana ahayn inaan iyaga lacag siiyo maadaama ay hadda gebi ahaanba aamusan yihiin. Waxay ku sheegeen wax ku saabsan “barnaamijiyaha ka shaqeynaya server-ka hadda” laakiin tan iyo markaas - ma jirin isgaarsiin iyo lacag celin. HA ISTICMAALIN proofy.io !!!
20, 2016 at 10: 00 PM
Waad ku mahadsan tahay talooyinka! talooyin cabsi leh.
Waad ku mahadsantahay qoraalka!
Waxaan raadineynaa shirkad bixin karta dukumiinti si rasmi ah loo oggol yahay oo ku saabsan in cinwaanada e-maylka la xaqiijiyey ay runti ansax yihiin oo la hubiyey.
Ma garaneysaa shirkad sidan oo kale ah?
Ma hubo in qof kastaa bixin karo xaqiijin rasmi ah maaddaama dadku joojiyaan isticmaalka emaylka oo beddelaan cinwaannada emayl maalin kasta. Sida ugu fiican ayaa ah barxad isku dayaysa inay qabato cinwaanka cinwaanka emailkaaga liiskaagana waa lagu xoqi karaa taas.
Jan 11, 2017 saacadu markay ahayd 11:07 PM
“Waxyaabaha layaabka leh, feker ahaanteyda, ayaa ah inaan aaminsanahay inay u fududahay SPAMMER inuu email ugu soo diro sanduuqaaga marka loo eego celceliska shirkadda dirtay fariin sax ah.”
Waxaad u badan tahay inaad ku saxan tahay tan, laakiin taasi waa sababta oo ah guud ahaan ganacsiyada uma adeegsadaan suuqgeynta iimaylka si sax ah, ama si isdaba joog ah oo ku filan liisaskooda si ay u noqdaan kuwo la isticmaali karo iyo inay iyagu bartaan dhaqannada ugu fiican. Iyaga (qof walba) waa inuu si joogto ah emayl ugu soo diro.
Laakiin ku saabsan liiska qalabka… laga cabsado!
Jan 11, 2017 saacadu markay ahayd 11:09 PM
Waxaan raaci doonnaa qoraalkan oo aan la yeelan doonno wareysi weyn oo podcast ah oo lala yeelanayo agaasimaha guud ee shirkadda Neverbounce, Oscar. La soco!
Waxaan u maleynayaa inaysan jirin waddo lagu xaqiijin karo emaylkaaga markii la abuuro akoonkaaga. Marka waxaan filayaa inay tahay inaad tan sameyso markii aad abuureyso ac-gaaga tallaabada ugu horreysa.
Liiska Mailing Edward
Maqaalka Awsome. Miyaan ogaan karaa haddii aad websaydhka ku maamushay agaasimaha guud ee 'Neverbounce', Oscar?
Apr 24, 2017 at 4: 47 PM
Waxaan raadinayaa macluumaad ku saabsan xaqiijinta cinwaannada emaylka waqtiga-dhabta ah maadaama macmiil cusub u imanayo shirkaddayda. Miyaa software-ka / teknoolojiyadda aan heli karaa oo aan ku dari karaa barnaamijkeenna hadda jira? Mise waxaan u baahan nahay inaan ka beddelno dhammaan barnaamijyadeenna hadda jira? In badan wax dhibaato ah ayaan ka qabnaa kooxdeena qorista cinwaanada emailka macaamiisha khaldan ama macaamilka ayaa sidoo kale sameynaya. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku joojiyo barta iibsiga halkii liiska la nadiifin lahaa markaa annaga oo kaliya ayaa hayna cinwaan emayl xun halkii aan ka gaari lahayn macmiilkayaga.
Agoosto 29, 2017 saacaddu markay ahayd 12:24 PM
haddii aad eegto xaqiijinta waqtiga dhabta ah ee emaylka, la hadal ragga emailchecker.com, waxaan khibrad u leeyahay gacanta koowaad ee adeegsiga xallintooda waqtiga-dhabta ah iyo midkeeda weyn oo saxan!
Jun 27, 2017 at 10: 36 PM
Hi Douglas, Isku soo duub wanaagsan halkaas. Waxaan dareemayaa inaad seegtay ciyaaryahan weyn - http://www.emailverifierapp.com Fadlan iska hubi. Mahadsanid
Agoosto 29, 2017 saacaddu markay ahayd 12:22 PM
Maqaalka Weyn Doug oo macluumaad badan iyo faallooyin waawayn, Waxaannu wadnaa shirkad hoggaamineed gen waxaanan leenahay bogag badan oo isku soo uruursada webka macaamiisha waxaanan u ururinnaa dhowr kun oo emayl maalintii! waxaan adeegsanay dhowr shirkadood laakiin waxaan kudhamaaday inaan dib ugu laabano shirkadeena ugu horeesay ee aan ku tijaabinay (shirkad la yiraahdo Email Checker) maadaama laga helay barnaamijyadooda inay yihiin kuwa ugu saxsan uguna kalsoonida badan. Waxaan u isticmaalnaa API-kooda boggaga isku soo uruursada iyo aaladda ay noogu weyntahay aadna caan ugu ah macaamiisheenna, waxay bixiyaan xaqiijin ballaaran sidoo kalena aan u isticmaalno foomka la isticmaalay waqtiba waqtiga laakiin waxaan u isticmaalnaa API-kooda maalin kasta natiijooyin waaweyn. Sikastaba waxaan rabay inaan la wadaago waayo-aragnimadayda sidaan ogahay inay jiraan tartan aad u badan oo halkaas ka jira, sii ragga ku jira emailchecker qaylo boggooda internetka waa http://www.emailchecker.com oo u sheeg John Morgan ayaa kuu soo diray 🙂
Oktoobar 15, 2017 at 4:14 PM
Farxad ayaad sheegtay farqiga u dhexeeya ansaxinta iyo xaqiijinta. Liiska ma ku dari karnaa emailchecker.com?
Oktoobar 27, 2017 at 9:39 AM
Lagu daray, Jonr!
Oktoobar 28, 2018 at 12:53 PM
Waa tan qalab kale oo faa'iido leh oo aan rabo inaan soo jeediyo: https://debounce.io
Miyaad ku dari kartaa tan liiskaaga?
10, 2018 at 7: 59 AM
Waxaan ku darnay DeBounce, mahadsanid!
Feb 3, 2019 markay ahayd 12:00 PM
Waxaan rabaa inaad soo jeediso hal barnaamij oo dheeri ah oo ku saabsan xaqiijinta emaylka - https://mailcheck.co
Waxay si aad ah ugu gudbiyaan astaamaha bulshada ee kuxiran boostada, kuna yar jeegaga tooska ah ee smtp. Waxay u oggolaaneysaa in la helo macluumaad dheeri ah oo la ogaado in milkiilaha iimaylku ku firfircoon yahay gravatar, gmail, iwm.
Feb 5, 2019 markay ahayd 6:56 PM
Mahadsanid, waan ku daray!
Aug 6, 2019 at 10: 18 AM
Miyaan ku dari karaa hal qalab oo aad u fiican liiskaan?
TrueMail (https://truemail.io/) waa qalab xaqiijin weyn oo emayl ah.
Waa mid sax ah oo si sahlan loo isticmaali karo. Waxay si dhakhso leh uga nadiifin doontaa liiskaaga cinwaannada emayllada ah ee aan ansax ahayn oo halista ah.
By habka, waxay leedahay 1,000 xaqiijinta email bilaash ah.
Agoosto 6, 2019 saacaddu markay ahayd 1:07 PM
Mahadsanid Alona! Waxaan ku daray liiska kale maadaama ay qarinayaan waddankooda asalka ah isla markaana ay xogtooda sirta ah u gaar yihiin.
May 24, 2020 at 5: 50 PM
Waxaad sidoo kale ku xaqiijin kartaa emaylka adeegan xaqiijinta bilaashka ah: https://www.emailverified.org
Nov 14, 2020 at 5: 06 AM
Hi Doug, waa wax cajiib ah sida aad maqaalka ugu cusbooneysiisay dhowrkii sano ee la soo dhaafay adeeg bixiyeyaasha cusub, waan ku amaanayaa dadaalka. Waxaan jeclaan lahaa inaan soo jeediyo Antideo in lagu daro liiska, waa mid ka mid ah adeegyada ugu jaban ee halkaas ka jira. Heerka bilaashka ah ee bixiya in ka badan 5000 oo jeeg oo ansax ah bishii ayaa ka badan inta ku filan meherad yar, markaa si weyn ayaan u qiimeyn doonaa haddii aad u fiirsan karto adeegga (www.antideo.com) oo nagu soo dar liiskaaga haddii aad aragto ku habboon.
Nov 18, 2020 saacadu markay tahay 4:41 PM
Mahadsanid, liiska ayaan ku daray. Hal dhinac oo qoraal ah, waxay umuuqataa goobta shirkadaada waalidka ay kaqorantahay.